सङ्गीत के हो युवापुस्ताले बुझन जरुरी छ : सङ्गीतकार नरहरिप्रेमी – Mero Film
नेपाल सानो भएर पनि विश्वमा एउटा सुन्दर मुलुकको रूपमा चिनिन्छ । नेपाललाई सुन्दरताको खानीको रूपमा स्थापित गर्न तीन तत्वको विशेष भूमिका रहेको छ । प्रथमतः भौगोलिक, दोस्रो प्राकृतिक र तेस्रो यहाँको सांस्कृतिको विविधता हो । भौगोलिक दृष्टिकोणबाट नेपाल अति नै सुन्दर मुलुकको रूपमा विश्वमा परिचित नाम हो । संगीत विना सबैकुरा अधुरो नै हुन्छ । यस्तै विगत २५ वर्ष भन्दा लामो समय संगीत क्षेत्रमा आवद्ध भई निरन्तर संगीको नै गुनगान गाउने एक गीतकार संगीतकार र गायक हुन नरहरी प्रेमी । राजा रानी फिल्मको चिपक चिपक बोलको गीतबाट अझै चर्चा पाएका नरहरीप्रेमीसंग मेरो फिल्मले गरेका कुराकानी
आरम हुनुहुन्छ , के गर्दे हुनुहुन्छ ?
म एकदम ठिक छु । आजभोलि कोभिडको कारणले व्यस्त जीवनलाई अहिले भने फुर्सदिलो बनाएको छ । अलि अलि गीतको काम गरिरहेको छु ।
सङ्गीत के हो तपाईँको अनुभवमा ?
सङ्गीतको तुलना केही सँग पनि गर्न सकिन्न । यसको पाटो नै धेरै फरक छ । सुख दुखको साथी हो सङ्गीत, मर्ने मान्छेलाई बचाउने धुन हो सङ्गीत । गीत प्राणी जगतको सर्वोत्तम कला हो । स्रष्टा र बिद्ध्वनले भन्ने गरेका छन् सङ्गीतको न भाषा हुन्छ, न सीमा र परिधि हुन्छ । साँचै सीमा, परिधि र भाषामा बाँधिन नचाहने एक मात्र कला सङ्गीत कला हो । यी सबैको बन्धनबाट किन टाढा छ त सङ्गीत रु सङ्गीत किन सबै प्राणी जगलाई नै मन पर्छ त ? किनकि सङ्गीत कला भावनात्मक कला हो, सङ्गीत कला मन भित्रको कला हो । सङ्गीतले हृदयलाई झन्कृत पार्छ, छुन्छ, माधुर्यता प्रदान गर्छ, मनलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ । सुर र तालको लयतमाक पनि हो सङ्गीत । सम्पूर्ण प्रकृति नै सङ्गीत हो ।
पछिल्लो समय गीत सङ्गीतमा फरकपन आएको नि ,अहिलेका युवापुस्ताले सङ्गीत बुझेका छन् ?
फरक पनि आएको छ । केही समय सापेक्षिक छन् भने कोही परिमार्जन गरिएका छन् । आफूले जे दियो त्यही सङ्गीत हो अब यसलाई कसरी बुझ्नु हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । अहिले युवापुस्ताहरुले सङ्गीत बुझ्नु भएको छैन भन्न मिल्दैन । उहाँहरूको प्रस्तुतिलाई आमीले सम्मान गर्नुपर्छ । तर परिमार्जनको नाममा हामीले मौलिकतालाई ध्यान दिनुपर्छ किनभने जुन गीत अमेरिकामा बज्छ त्यो नेपालमा पाच्य हुँदैन यसैले नराम्रो छाडा गीतहरू पनि छन् यसको लागी हामी सबै लागिपर्नुपर्छ । हामी सङ्गीत बुझेकाहरूले नयाँपुस्तालाई सङ्गीत बुझाउन जरुरी छ र बुझन जरुरी पनि छ ।
अहिलेका गीत सङ्गीत कालजयी हुन सकेननी त्यस्तो किन ?
कुनै कुनै गीतको आफनो छुटै ब्रान्ड छ । यसैले पनि ती गीतहरू दिगो हुन्छन् । आजको गीत अलि पछि याद आउन सक्छ ।
गीतसङ्गीतमा आउँदाको केही तिता मिठा अनुभवहरू ?
धेरै छन् । मेरो सङ्गीत क्षेत्रको यात्रा लगभग २५ वर्ष भन्दा पनि बढी भयो । यति लामो समयमा धेरै तिता मिठा अनुभवहरू छन् तर सबै याद नहुँदो रहेछ । एक चोटि मेरो पहिलो गीत रेकर्ड भयो जुन रेडियोमा बज्थ्यो र त्यो एल्बम सार्वजनिक भएपछि म मेरो श्रीमतीसङ बैकमा पैसा झिक्न जाँदा छुटै खुसी मिलेका थियो । अनि एउटा नमिठो पल पनि छ रेडियो नेपालमा जानुपर्ने त्यहाँ जाँदा उहाँहरूको व्यवहारहरू देखेर सारै नराम्रो लागेको थियो । उहाँहरू सबै त होइन तर कोही कोही थिए जसले त्यहाँ छिर्ने नहुने कसैसङ हामी बोल्नै नहुने हामी त केही होइन कोही होइन जस्तो त्यो मेरो लागी एउटा नमिठो पल थियो ।
कोरोना कहरले सङ्गीत क्षेत्रमा र व्यक्तिगत रूपमा कतिको असर पार्‍यो ?
कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ गीतसङ्गीत क्षेत्रमा मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा यसको असर देखिएको छ । अब हामी कलाकारहरू त तीज नजिकिँदै गर्दा विभिन्न देश विदेशहरूमा जान्थ्यौ त्यहाँ जान पाइएन दर्शकअरु र स्टेज सारै मिस हुन्छ । पहिलो कोभिडमा त म पनि सारै नै आत्तिएको थिए । तर दोस्रो लकडाउनमा भने मलाइ पनि सजिलो भयो । आफ नै युटुवमार्फत गीत गीतको बारेमा केही आफूले जानेको कुराहरू भिडियो कुराकानी सेयर गरे त्यही नै हो ।
सङ्गीतमा नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्तालाई जोडेर कसरी लान सकिएला ?
यसको लागी हामीले सबैजना एक जुट भएर अगाडी बढ्नुपर्छ । गाह्रो त छ किनभने पुराना पुस्ता नयाँ पुस्तामा धेरै अन्तर भइसक्यो दर्शककले के चाहन्छन् भन्ने कुरा अहिलेको युवापुस्तामा छ । तर कतै कतै यही नयाँ दिनुपर्छ भन्ने सोचाइले नै गर्दा र दिने क्रममा अलिकति गीतको संस्कृति र मौलिकता ओझेल परेको जस्तो पनि लाग्छ । नयाँले पुराना अग्ररजको सम्मान गर्न र उहाँहरूको बाटोलाई समाउने हो भने र अग्रजहरूले पनि नयाँ पुस्तालाई माया गरेर आफूले साथमा लिएर हिँड्ने हो भने पक्कै पनि सङ्गीतमा नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्तालाई जोड्न सकिन्छ ।
२०७८ भदौ २७ गते १२:४३ मा प्रकाशित